China Hook Type Shot Blasting Machine Famokarana sy mpamatsy - Puhua
Home > Products > Masinina fanapoahana tifitra karazana hook
Hook Type Shot Blasting Machine dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny fanariana, ny rafitra, ny tsy ferrous ary ny faritra hafa. Ity milina fanapoahana fitifirana andian-dahatsoratra ity dia manana karazany maro, toy ny karazana farango tokana, karazana farango roa, karazana fiakarana, karazana tsy manainga. Manana tombony amin'ny tsy lavaka, rafitra matevina, famokarana avo lenta, sns.
1). Hook Type Shot Blasting Machine no tena ampiharina amin'ny fanodinana ireo sangan'asa antonony sy kely habe amin'ny ambaratonga lehibe. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo, rafitra matevina.
2). Ny sangan'asa dia azo entina mitohy. Ny fomba fiasa dia ny fametrahana ny hafainganana, ny fanantonana ireo sangan'asa amin'ny farango ary esorina rehefa avy nodiovina ny tifitra.
3). Ny farango tokana tsirairay dia afaka manantona ny lanjany 10 kgs ka hatramin'ny 5000 kgs misy famokarana avo lenta sy fihazakazahana.
4). Izy io dia misy fiatraikany tsara indrindra amin'ny sangan'asa sarotra na ny ambony na ny ao anatiny, toy ny fonosan'ny motera sy ny casing motera.
5). Hook Type Shot Blasting Machine dia safidy mety ho an'ny indostrian'ny fiara, traktera, motera diesel, motera sy valizy.
Masinina manapoaka fitifirana mitsangana
Vertical Shot Blasting Machine dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny fanariana, ny rafitra, ny tsy ferrous ary ny faritra hafa. Ity milina fanapoahana fitifirana andian-dahatsoratra ity dia manana karazany maro, toy ny karazana farango tokana, karazana farango roa, karazana fiakarana, karazana tsy manainga. Manana tombony amin'ny tsy lavaka, rafitra matevina, famokarana avo lenta, sns.
Masinina miparitaka amin'ny turbine ho an'ny sisiny
Turbine Shot Blasting Machine ho an'ny Rims dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny casting, ny rafitra, ny tsy ferrous ary ny faritra hafa. Ity milina fanapoahana fitifirana andian-dahatsoratra ity dia manana karazany maro, toy ny karazana farango tokana, karazana farango roa, karazana fiakarana, karazana tsy manainga. Manana tombony amin'ny tsy lavaka, rafitra matevina, famokarana avo lenta, sns.
Easy-Maintainable Masinina fanapoahana tifitra karazana hook dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Masinina fanapoahana tifitra karazana hook dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Masinina fanapoahana tifitra karazana hook miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.